सिद्धबाबा सुरुङमार्गको टेन्डर फागुनसम्म - NewsCenterNepal.com
काठमाडौं –लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गतको ‘सिद्धबाबा सुरुङमार्ग’ निर्माणका लागि दोस्रो चौमासिक अर्थात् फागुनसम्ममा सडक विभागले टेन्डर निकाल्ने भएको छ । स्रोत सुनिश्चितताको सहमति पाएको झन्डै १ वर्षमा सडक विभागले बुटवल–पाल्पा सडक खण्डमा पर्ने सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि टेन्डर निकाल्ने तयारी गरेको हो ।
२०७६ मङ्सिर २ गते अर्थ मन्त्रालयले रू. १० अर्ब १५ करोडको सीमाभित्र रहेर उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । त्यसलगत्तै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको विभागले टेन्डर निकाल्न भने समय लगाएको हो । सुरुङमार्गको कुल लागत करीब रू. ८ अर्ब रहेको छ । विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले दोस्रो चौमासिकसम्ममा सुरूङमार्गको टेण्डर निकाल्ने जानकारीदिनु भयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाउन २०७६ असोज १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि अनुरोध गरेको थियो । अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरेको नेपालको आफ्नै सुरुङमार्गसम्बन्धी मापदण्ड नभएपछि विभागले मापदण्ड बनाउने तयारी थालेको थियो ।
उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २०७६ साउनमा नेपाल र स्वीस कम्पनीले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक डिजाइनसहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको थियो ।